पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि ट्रेल रेस हुँदै - Aarthiknews
काठमाडौं । विश्वको नवौँ अग्लो स्थानमा पर्ने यहाँको पाँचपोखरी गाउँपालिकाको पाँचपोखरी कुण्डसहितका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि ट्रेल रेस प्रतियागिता गरिने भएको छ । बागमती प्रदेशको खेलकुद विकास परिषद् र पाँचपोखरी खेलकुद विकास समितिद्वारा संयुक्तरूपमा आयोजित पाँचपोखरी विन्टर अल्ट्रा ट्रेल हाफ म्याराथन–२०२१ हुन लागेको हो ।
दशैंमा घुम्न जाने सोच बनाउनु भएको छ ? जानुहोस् यी पाँच ठाउँ
दशैंको विदामा घुम्नजाने सोचमा हुनुहुन्छ ? (तस्बिरमा हेर्नुहोस् क्यानजे भ्याली)